Zimbaabween ayyaana biyyaalessa Mugaabee ifatti labsite - BBC News Afaan Oromoo
Zimbaabween ayyaana biyyaalessa Mugaabee ifatti labsite
Goodayyaa suuraa Obbo Mugaabeen magaalaa gudditti Haraaree keessa akka turanii fi biyyaa bahuuf karoora akka hinqabne ibsaniiru
Zimbaabween Guraandhala 21 Ayyaana Dargaggoota biyyaalessaa kan Robeerti Gabreel Mugaabee jedhamuun akka kabajamu ifatti labsuun guyyaa dhaloota pirezidaantii duraanii ayyaana akka ta'u gochuusaanii gaazexaan biyyattii Heeraald gabaaseera.
Pirezidaantichi haarawaan Imeerson Mnaangaagwaa torban kana keessa kaabinee muudu jedhame eegama.
Obbo mugaabeen torban darbe keessa aangoo kan gad dhiisan erga raayyaan waraana biyyattii giddu galee fi mormiin biyyatti keessatti erga babal'ate booda ture.
Haalli biyyatti keessa jiru gara tasgabbiitti wayita dhufaa jiru kana keessa, poolisii fi waraanni biyyatti waliin ta'un eegumsa gochaa akka jiran angaawoonni biyyatti dubbataniiru.
Samichaa fi seeraan ala qabeenya namaa keessattu lafa qonnaa fi manneen fudhatama akka jiramu gabaasni isaan qaqabeera.
Guyyaan dhaloota prezidaantii duraani kun akka ayyaana waggaa ta'uuf gaafiin Liigii Dargaggoota paartii Zanu-PF godhame kan fudhatama argate ji'a Hagayya darbe keessa ture.
Murteen kunis seera qabeesummaan Jimaata darbe akka galmaa'u ta'uun isaa dabalame ibsameera.
Torbe Darbe Mnaangagwaan Preezidantiin biyyattti duraanii akka hundeessaa fi gaggeessaa tokkotti kabajaa fi fudhatamumman isaaniif malu akka kennamuuf gaafataniiru.
''Akka dhuunfaa kootti, inni abbaa, gorsaa, qabsa'a cimaa fi hooganaa koo ta'ee itti fufa'' jedhan hasa'aa Jimaata darbe yoo mudaman has'anirratti.
Obbo Mugaabeef Doolaarri milliyoona 10 kennameef yoo ta'u, waajiraa isaan fageesuu fi dhiisuun garuu hin mirkanoofne
Sirna duriirraa wanti adda ta'u ni jira laata?
Obbo Mnangaagwaan mootummaa hunda galaa hundeessu moo hoggantoota sirna Mugaabee keessa turan itti fufsiisu inni jedhu hin mirkanoofne.
Paartiin Mormiituu Muvmeent for Dimokraatik Cheenji jedhamu sirni ce'umsaa hunda gala ta'e akka jiraatuufii filannoo bilisaa bara dhufu geggeefamuuf bu'uurra akka kahamu gaafachaa jira.
Bulchiinsa Zanu PF jalatti ajjechaawan hammenyaan raawwataman wajiniin maqaan saanii deddebi'ee kan ka'u pirezidant Mnangagwaan, Jijjirama siyaasaa Dimookraatawa lammileen biyyatti hawwan faaraan hin simatan yaaddoon jedhu jira.
Pirezidaant Mnangagwaan bakka Pirezidaantii biyyatti duraanii Robert Mugaabee bu'uun Jimata darbe waadaa galaniiru.
Jalqaba ji'a kanaatti Misiter Mnangagwaan aangoo itti aanaa pirezidaantumma isaanirraa buufamuun isaanii rakkoo siyaasa biyyatti hammeessuun boodas humni ittisa biyyaa gidduu galuun Mugaabeen aangoo isaanii akka gadhiisan sababa ta'eera.
Obbo Mugaabee fi haati warraa isaanii Grees, mana jireenyaa isaanii Magaala gudditti Haraaree keessa jiru. Yaada biyyatti gadhiisanii deemuus hin qaban.
Humni waraanaa biyyatti akka jiddu galuuf sababa kan ta'e Mister Mugaabeen itti aanaa pirezidaantii ka turan Mnangagwaa aangoo irraa buusuun haati warraan isaanii dhaaltuu angoo isaanii akka taatu yaaduu isaaniitiin